🥇 ▷ Clash Royale ayaa tartan cusub kala kulmaya lamaanayaasha ka soo jeeda Touchdown ✅
Clash Royale ayaa tartan cusub kala kulmaya lamaanayaasha ka soo jeeda Touchdown
Waxaa siidaayay sida Rush Wars, ka ragga Supercell Ma joojiyaan inay fiiro gaar ah u yeeshaan ciyaartooydooda. Clash Royale. Aad iyo aad ayey u badan tahay, in bilooyin qaar ay awood u siinayaan dhacdooyinka xawaare sidan oo kale ah oo kan hadda socda uusan ku dhamaan, markii aan horeyba u haysan ugu yaraan hal dheeri ah oo sugaya in la ciyaaro. Iyo, marka lagu daro, kiisaska intooda badan waxay kuxiran yihiin e Hababka ciyaarta xiisaha leh.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira munaasabado sida maanta oo kale marka ugu horreysa ay dhacdo laakiin aan ahayn tan labaad. Waxaan tixraac, dabcan, u gudbinaynaa tartan cusub taasi waxay bilaaban doontaa berrito, taasina waa mid aan ahayn mid kale Taabasho. Kala duwanaanshahaan alaabooyinka caadiga ah ayaa la gaarey Clash Royale waqti dheer kahor, iyo in kasta oo markii hore ay ahayd mid xiiso leh oo xiiso leh, haddana si dhakhso ah ayay dib ugu laabashada asalka u ahayd bulshada.
Supercell mararka qaar ma maqlo codsiyada bulshada
Supercell, dhinaca kale, dhagool bay ka dhigtay arintaas mana joojin inay ina siiso caqabad Taabasho waqti ka waqti, sida maanta oo kale. Miyaad jeceshahay inaad u ciyaarto sida dhacdooyinka kale? Hagaag, runtu waa maya. Laakiin haddii aan tixgelinno inay tahay a fursad wanaagsan si aad noogu hesho abaalmarinno dheeraad ah iyo sidaa oo kale bilaash ah, shaygu waxyar buu iska beddelaa.
Caqabadda Taabasho yimaado, sidaan nidhaahno, berrito; way sameyn doontaa mar haddii uu kan hada dhamaado, kaas oo leh Qoryaha xaabada sida protagonist Isku daygaaga ugu horeeya ayaa noqon doona aan micno lahayn iyo, haddii saddex jeer naloo baabi’iyo, dib ayaan u soo noqon karnaa bixintii hore ee dahabka (Xaaladaas oo aan u maleynayo inay u qalanto gabi ahaanba). Intaa waxaa dheer, Thanks to xaqiiqda ah in ay tahay 2 vs 2, waan ciyaari karnaa asxaabta ama xubno ka tirsan qabiilkeena, oo wax kale qabta xiiso leh.
Maaha abaalmarinta ugu wanaagsan ee lagu xusuusto Clash Royale… laakiin sidoo kale ma xuma
Waxay ku saabsan tahay a tartan gaaban. Kaliya uma baahnaan doonno lix guul si loo dhammaystiro. Iyo, sida Supercell uu noo isticmaalay gudaha Clash Royale, ka dib markii mid walba oo ka mid ah kulamada uu guuleysto waan heli doonaa abaalmarin. Abaalmarinno in kasta oo ayan ahayn wax adduunka kale ka yimid, haddana aan haba yaraatee wax xun ahayn: 4,000 qadaadiic dahab iyo saddex laabad oo ay ku jiraan mid lacag, mid dahab ah iyo hillaac kale (Taas oo aan u dooran karnaa ilaa xad waxaan rabno in na taabato).
Caqabadan cusub ee Taabasho taas oo gaareysa Clash Royale wuxuu yareynayaa heerka aan ku baranay waqtiyada dambe. Laakiin haddii aan tixgelinno inaysan maalin uun dhaafin oo aannan haysan a dhacdo firfircoon, shaki la’aan waa shar yar; Waxaan ognahay in marka ay dhamaato, ay noqon doonto tan xigta waxaan rajeyneynaa in munaasabadaas abaalmarinta ama ciyaarta ciyaarta fiicnaada.